SNM oo colaad ka hurinaysa Ogaadeeniya | allsanaag
SNM oo colaad ka hurinaysa Ogaadeeniya
Beesha Absame oo iyaguna ku socda khaladkii beesha Harti looga qabsaday Laascaanood, Sool iyo Sanaagna ay ku noqdeen dhulka lagu muransan yahay.
18 sano ka hor, shir ay golaha wasaaradda dawladda Puntland ay ku lahayeen Garowe ayaa Allah ha u naxariistee wasiir ka mid ahaa golaha wasiirada oo ka soo jeeday beesha Maakhir uu soo jeediyey sida qura oo loo ilaalin karo midnimada Soomaaliya iyada oo aan xabad lagu ridin SNM.
Wasiirkan ayaa golaha wasiirada u soo bandhigay labo arimood:
1- In wad hadal kasta oo beesha Isaaq iyo Puntland wada gelayaan loo diraa siyaasiyiin ka soo jeeda Sanaag iyo Sool. Sababtoo ah iyagaa yaqaan taariikhdii hore oo ay wada degaan
2- In xoolaha ka imanaya Somali galbeed ee soo mara gobolka Cayn oo ay markaa Puntland gacanta ku hayso, haddii ay u socdaan Berbera in Canshuurta lagu badiyo, inta ay ka soo laabanayaan fikirka guracan ee goosashada. Laakiinse haddii ay u socdaan Boosaaso iyo Puntland in canshuurta laga dhimo.
Madaxdii Puntland ee markaas Puntland xukumaysay labadii fikradood midna ma qaadan . Maamulka Puntland, siyaasigii ugu horeeyey ee maamulka u direen Hargaysa wuxuu ahaa Allah ha u naxaeiistee siyaasi dhintay oo ka soo jeeday beesha Majeeteen. Kaantaroolkii la dhigi lahaaa Buuhoodle oo lagu cunaqabayaun lahaa SNM lama dhigin. Taasna waxa bedelay in SNM Laascaabood qabsadaan iyaga oo jileec ka helay ergaygii loo diray.
Maanta beesha Kablalax Daaarood ee Soomaali galbeed, laba a midkood ayaa u taal inay Garacad deked ka dhigtaan oo xoolahooda dekeddaa laga dhoofiyo iyaga oo soo dhex maraya degaanada Culimada Tanade Daarood iyo inay maalgeliyaan nimanka hoos ka hadlaya oo isir nacaybka dilooday
← Danjire Axmed Cawad Ciise oo saxiixay heshiis caalami ah Haweenka Badhan oo Sahay Gaarsiiyey Ciidanka Yubbe Gaarey. →